﻿ ‘समस्या आयो भन्दैमा व्यवशाय रोकिनु हुँदैन’ : कमल पौडेल
मङ्गलबार ०३, असार २०७६
चुनावको तयारीमा अहिले हामी मुख्यतयाः आफ्ना व्यवसायीहरुलाई वहाँहरुको एजेन्डामा प्रवेश गरी व्यवशायीहरुको समस्या पत्ता लगाउन सबैसँग भेटघाटको कार्यक्रम अगाडी बढाएका छौँ ।
मैले २०४८ सालदेखि इटहरीमा एउटा सानो किराना पसलबाट आफ्नो व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेको हुँ । २०४८ सालदेखि आजसम्म म निरन्तर इटहरी र इटहरीका व्यवसायिको एउटा मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागी लागी परेको छु । समय क्रममा हामीले हाम्रो जीवन यात्रालाई पनि बदलेर समयअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले आउने सन्ततिहरुलाई उनिहरुको पढाइ, लगाव र झुकावअनुसार हामीले बेलाबेला व्यवसायलाई बदल्नु पर्ने भएकाले म अहिले किराना व्यवसायलाई बदलेर मोबाइल तथा प्रविधिको थोक बिक्री वितरणमा अघि बढिरहेको छु ।
सफल व्यवसायि बन्न के गर्नु पर्दो रहेछ ?
सफल व्यवसाय भन्ने शब्द नै आफैमा एउटा मुल्य मान्यता बोकेको शब्द हो । मैले आफ्नो जीवनकालको २५ वर्षको व्यवसायिक दौरानमा अनुभव गरेअनुसार चै सफल व्यवसायि बन्न इमानदारीता, मिताव्यायिता र लगनशीलता आवश्यक छन् ।
इटहरीको सन्दर्भमा व्यवसायिका मुख्य समस्याहरु के–के हुन् ?
व्यवसायिको मुख्य समस्या भनेको हिसाबकिताबको हो । व्यवसायिहरुले म कुन कारोबार गर्दै छु, कति कारोबार गर्दै छु, मेरो नाफा र घाटा कति छ भन्ने कुरा सुक्ष्म रुपले अध्ययन नगर्दा समस्या देखा पर्छ । हिसाब किताबमा कसरी हुन्छ भन्ने तालिम दिलाउनु आवश्यक छ । अर्को समस्या भनेको घरवहाल अनि विभिन्न खालका करका समस्याहरु छन् ।
तपाइले जितेर गएपछि यो क्षेत्रको व्यवशायिक विकासका लागि के गर्नुहुन्छ ?
विगत दुई कार्यकाल मैले उद्योग वाणिज्य संघमा बिताएको छु । हाम्रो एरिया समग्र इटहरीको २० वटा वडामा पर्ने भएकाले सबै वडामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी साथीहरुको व्यवसायलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने, वहाँहरुको व्यवसाय एउटा आयमुलक काम हो भनेर आश्वस्त तुल्याउनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । किनकि व्यवसायमा सुरुका दिनदेखि नै समस्याहरु आउने गर्छन् । तर समस्या आयो भनेर रोकिनु हुँदैन निरनतरता दिनु पर्छ र निरन्तरताको प्रतिफल जहिले पनि सुव्यवस्थित र मिठो हुन्छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायिहरुको हक हित र सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध तथा पवित्र संस्था हो । यहाँ समयको सेरोफेरोमा विभिन्न पदाधिकारीहरु पुग्नुपर्छ । वास्तवमा व्यवसायको हक हित तथा सुरक्षाकालागि उम्मेदवारी दिएका हौं । हामीले नै व्यवसायीका ति समस्याहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने तथा बुझ्ने तथा समाधान गर्न अभ्यास गरिसकेको हुनाले अझै बाँकी रहेका समस्याहरुलाई जरैदेखि निर्मुल गर्नका लागी हामीलाई भोट दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
हामी एउटा साझा एजेण्डा तथा मुलमन्त्र लिएर अघि बढौँ । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी सधै व्यवसायीको पक्षमा छ । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी व्यवसायिको हक हितको संरक्षण गर्ने तथा पीर मार्का समाधान गर्नका लागि लागिपरेको हुनाले हामी सबै हातेमालो गरेर हिँडौं । आउने निर्वाचनमा हाम्रो टिमलाई जिताऔ ।